Haider Oo Noqday Filimka Loogu Jecel Yahay Dalka Hindiya | Hawraar
Haider Oo Noqday Filimka Loogu Jecel Yahay Dalka Hindiya
Filim cusub oo uu soo saaray, Vishal Bhardwaj oo ka mid ah rukumada ugu waaweyn, soo saarayaasha filimada ee Bollywood Hindiya ayaa noqday mid aad looga taageeray dalkaas, waxaana sida warbaahinta dalkaas iyo ta caalamiga labaduba xuseen uu kasbaday kalsoonida dadka Hindiya oo dhan.
Filimkan oo qiso jacayl ah ka faaloonaya, lagana soo dheegtay, sheeko masrixiyeedka (Hamlet), ee uu qoray, gabayaagii Ingiriiska ahaa ee William Shakespeare, waxa uu Vishal ku saleeyay, xalaada kala qaybsanaanta ah ee jirta gobolka Kashmir.
Waxaanu halkii ay kaga jireen, dadka Ingiriiska iyo reer Yurubka ah, u badalay, xubno reer Kashmir iyo Hindi ah, kuwaas oo si wayn u soo jiitay dadka reer Hindiya, waxaanu ku muujiyay sida colaaduhu u dhibaateeyaan lamaanaha is jecel.
Filimkan ayaa soo saaraha sare ee reer Bollywood Vishal waxa uu Shakespeare ku badalay, gabayaa reer Kashmir ah oo lagu magacaabi jiray, Shahiid kaas oo gobolka Kashmir aad looga jecel yahay, kana mid ah dadka ay ku dhaataan.
Vishal ayaa dhawrkii sanadood ee ugu danbeeyay filimada uu soo saaro aad looga jeclaa dalka Hindiya, waxaana ku guulaystay, filimkiisi Maqbool ee sanadkii 2003-dii loogu jeclaa dalka Hindiya, kaas oo uu ka matalay isla sheeko laga soo wariyay, gabayaaga reer Ingiriis ee William Shakespeare, gaar ahaan sheekadiisa lagu magacaabo (Macbeth).
Sidoo kale filimka (Omkara ee sanadkii 2006-dii uu soo saaray ayaa isna aad looga xiiseeyaa dalka Hindiya, waxaanu filimkiisan Haider, ka qisoonayaa, gabadh uu dhalay Shahid oo jeclaanaysa Inaabtigeed oo ay aad isaga soo hor jeedaan aabaheed.
Hamlet waxa matalaya, Shahid Kapoor halka xaaskiisana ay ka matalayso, Shraddha Kapoor, lamaanaha caashaqoodu wax ka badalayo mawqifka iyo xaalada taagana waxa kala matalaya, Tabu Gertrude iyo Kay Kay Menon.